Andraikitra ara-tsosialy - Solidis
Ny FOMBA FIASANAY
SOLIDIS dia resy lahatra fa ny faharetan’ity orinasa ity dia tsy miankina samirery amin’ny fahaiza-mitantana amin’ny ankapobeny, fa indrindra koa amin’ny fahafahany mamantatra mialoha ary mamaha ny hetahetan’ny mpandray anjara rehetra, na ny ato anatiny izany, na ny any ivelany. Vokatry ny fomba fandraisana andraikitra ara-tsosialy, SOLIDIS dia mandray anjara mavitrika ihany koa amin’ny fanatsarana sy fampivoarana ny hoavin’ny Olontsotra sy ny Orinasa madinika eto Madagasikara. Izany dia hamarininay amin’ny alalan’ny fandaharan’asa tsara rafitra sy ny fizaram-pahalalana.
Ankoatra izay, SOLIDIS dia miezaka hatrany mitady ny vahaolana maharitra hampiatra ny sarany mifanaraka amin’ny fahefan’ny mpanjifa rehetra ary manaja ny fampiarana ny « fanasandana tompon’andraikitra » .
Mpisehatra amin’ny fivelaran’ny maha-olona ihany koa SOLIDIS satria izahay dia miaro ny fanandratana ny MIRALENTA, ny FAHALEOVANTENAn’ny vehivavy, ny fahatomombanan’ny toeram-piasanan’ireo mpiasanay ary miditra an-tsehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny tanjonay dia ny hametraka kolontsain’orinasa mifototra amin’ny fitohizan’ny fandraisana andraikitra ato anatiny sy ny fanohanana ireo tetik’asa mitondra firoboroboana eto an-toerana.
NY ANDRAIKITRAY ARA-TSOSIALY:
« Mpisehatra momba ny fampandrosoana ny maha-olona »
Ato anatiny, ny andraikitray ara-tsosialy dia mamporisika:
Ny fivoarana iaraha-mientana sy ny fifampizarana traikefa mifototra amin’ny FIHAINOANA sy ny FIFAMPIRESAHANA ara-tsosialy.
Ny fampiroboroboana anatiny mba hitondrana anjara biriky amin’ny fampandrosoana sy ny fahasamihafana.
Ny politikan’ny fanakaramana mifototra amin’ny foto-kevitra « sandao vola ny faha-matihanina ary valio soa ny fahaiza-manao »
Ny fiadanana ao am-piasanan’ireo mpiasanay sy ireo fianakaviany.
NY ANDRAIKITRAY EO ANIVON’NY TONTOLO IAINANA:
« Mpandray anjara mavitrika amin’ny fanajariana ny tontolo iainana» Ny fiantraikan’ireo asanay mivantana amin’ny tontolo iainana dia ny fanjifana angovo, fanjifana rano, fanjifana taratasy.
Ny fomba fiasanay momba ny tontolo iainana dia voafehin’ny fanapahan-kevitra iraisam-pirenena natao hoan’ny famporisihana ny famatsiam-bola tetik’asa izay ambany ny tahan’ny karbonina ampiasainy. Noho izany, SOLIDIS dia nanamboatra fitaovana ara-bola izay mikendry ny handresy ny risika manakana ny famatsiam-bola an’ireo tetik’asa izay ambany ny tahan’ny karbonina ampiasainy. Ankoatr’izany, SOLIDIS dia mampiasa ny foto-kevitra hoan’ny famatsiam-bola tompon’andraikitra. Izany dia midika ho fampidirana ny olana momba ny tontolo iainana ao anatin’ny fanapahan-kevitra ny hamatsiam-bola sy ny famaritana ny vokatra atolotra.
Manana fifandraisana manokana amin’ireo mpanjifany, SOLIDIS dia mandray andraikitra amin’ny fampahafantarana ireo mpanjifany ny amin’ny fomba fanao tsara hananana momba ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny sosialy.
IREO ANDRAIKITRAY EO ANIVON’NY MPANJIFA
“Mpisehatra mavitrika ara-toekarena sy ara-tsosialy“, SOLIDIS dia miasa amin’ny lafiny rehetra mba ahafahan’ny ankamaroan’ny olona misitraka ireo karazana tolotra famatsiam-bola natolotra ary mba hampihena ny tahan’ny findramam-bola amin’ny Banky.
Ny fandraisana andraikitray dia tarihin’ireto famantarana manaraka ireto:
Ny isan’ny mpindram-bola noraisina an-tanana
Ny haben’ny fampindramam-bola nekena
Teti-bolan’ny fandraisana an-tanana nomena
Ireo ANDRAIKITRAY ARA-TOEKARENA:
« Mpiray ombon’antoka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara »
Ny lazan’ny SOLIDIS dia vokatry ny fiaraha-miasany amin’ireo mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola ary koa ireo mpanjifa. Io fiaraha-miasa io dia mila ny fiaraha-mientan’ny sampan-draharaha rehetra amin’ny fifehezana sy ny fanandratana ny kolotsaina momba ny risika manomboka amin’ny ekipa mpanatanteraka ka hatramin’ireo mpanjifa / mpiray ombon’antoka.